Faits-Divers – Page 1331 – Midi Madagasikara
Quincaillerie nationale : Nisy naka an-keriny ny tompony omaly
Redaction Midi Madagasikara 19 novembre 2013 naka an-keriny, nationale, Quincaillerie
Tokony ho tamin’ny dimy ora hariva omaly no nisy naka an-keriny ny karàna iray tompon’ny “quicaillerie nationale” ao Toamasina. Iny izy handeha hivoaka ny toeram-pivarotana iny, raha avy nanidy izany, no tonga ireo olon-dratsy. Nandeha fiara tsy mataho-dàlana izy ireo ary nanambana basy no sady nampiditra an-keriny ilay karàna tao anatiny. Tamin’ny ora nanoratanay omaly…
Betafo : Tovolahy novonoina, nafenina tao an-davabato ny fatiny
Redaction Midi Madagasikara 19 novembre 2013 Betafo, Tovolahy novonoina
Tovolahy iray vao herotrerony tokony ho 22 taona eo no hita faty tao Ambatonikolahy distrikan’i Betafo ,rehefa tsy nody an-trano nanomboka ny 2 novambra lasa teo. Nivoaka ny trano ho eny an-tanimboly no antony nivoahany ny tranony io 2 novambra lasa io. Tsy niverina tao an-trano intsony anefa izy nanomboka io daty ka nanahy mafy…
← Previous 1 … 1 330 1 331 1 332 Next →